ISIS ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာ အယ်လ် ဘဂ္ဂဒါဒီ နောက် လိုက်ရင်း ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း တွစ်တာတွင် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ဓာတ်ပုံတင်ပြီး ဖွင့်ချခဲ့တဲ့ တာဝန်ထမ်းဆဲ စစ်ခွေး
By ဧရာဝတီ2November 2019
ISIS ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာ အယ်လ် ဘဂ္ဂဒါဒီ၏ ခြံဝန်းကို စီးနင်းရာတွင် သုံးသည့် အာရုံခံစားမှုမြင့်သော ခွေးများကဲ့သို့သော စစ်ခွေးများသည် စစ်ဆင်ရေး အများအပြားတွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းမှ ပါဝင်ကြသည်။
လက်တွေ့တွင် ၎င်းတို့သည် လွန်စွာအရေးပါသောကြောင့် တရားဝင်မဟုတ်သော်လည်း အဆောင်အယောင်အဖြစ် ၎င်းတို့ကို ရာထူးများ သတ်မှတ်ပေးခံရပြီး ၎င်းတို့ကို ထိန်းကြောင်းကိုင်တွယ်သူထက် တဆင့်မြင့်မားသော ရာထူးများ ရရှိကြသည်။
ထိုသို့တဆင့်မြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည် ခွေး၏ အခန်းကဏ္ဍကို ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီး အဆင်မပြေသော အခါများတွင် ခွေးကို သက်ညှာစွာ ဆက်ဆံရေးအတွက် ခွေးထိန်းသူများကို သတိပေးရန်ဖြစ်သည်။
ခွေးနှင့် ထိန်းကျောင်းသူတို့ကြားက ကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမှုက အရေးကြီးသည်
ဘဂ္ဂဒါဒီကို မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံစည်စေသည်အထိ နောက်ယောင်ခံလိုက်သော ခွေးများသည် ၎င်းတို့၏ အမည်ကို လျှို့ဝှက်ထားစေကာမူ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများ ဖြစ်လာကြသည်။ ထိုခွေး၏ ဓာတ်ပုံအရ ၎င်း၏အမျိုးအစား (ဘယ်လ်ဂျီယံ မယ်လင်နွိုက်စ်) ကို အတည်ပြုနိုင်သော်လည်း ထိုကောင်လေး (ကောင်မလေး) ၏ အကြောင်းကို အနည်းငယ်သာ သိကြသည်။
ထိုခွေး၏ အမည်နှင့် ရာထူးအဆင့်ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းသည် ထိုခွေး၏ ဒယ်လ်တာ တပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များသို့ ဦးတည်စေသည်ဟု ဝါရှင်တန်ပို့စ်က ဖော်ပြသည်။
၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလအတွင်းက မူးယစ်ဆေးနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်း ရှာဖွေမှု လေ့ကျင့်ရေးတခု
ထိုတပ်ဖွဲ့သည် လျှို့ဝှက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုတပ်ဖွဲ့သည် စစ်မြေပြင်တွင်ပင်ရှိနေသေးပြီး ခွေး၏အမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသည် ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ထိန်းကြောင်းသူ နှင့် ခွေး၏ အသက်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော် နယူးစ်ဝိခ်နှင့် ဝါရှင်တန်ပို့စ်တို့က ထိုခွေး၏ လိင်နှင့်အမည်ကို ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
ခွေးကို ကိုင်တွယ်ထိန်းကြောင်းသူသည် ၎င်းတို့၏ ပစ်မှတ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူရန် ခွေး၏ အပြုအမူအပြောင်းအလဲနှင့် သိမ်မွေ့မှုကိုသာမက ခွေးမည်သို့ ခံစားနေရသည်ကိုပင် ဖတ်ရှုတတ်ရန် လိုသည်။
၂၀၁၁ မတ်လ မက္ကဆီကို ပင်လယ်ကွေ့တွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့၏ လေ့ကျင့်ရေးတခုအတွင်း ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်းနေစဉ်
ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရပါက ခွေးသည် အလုပ်မလုပ်လိုဖြစ်နေလျှင် သို့မဟုတ် တချို့သော လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် ချို့ယွင်းချက်ရှိနေလျှင် ထိုကိစ္စကို ခွေးကိုင်တွယ်ထိန်းကြောင်းသူက သိရှိပြီး လုပ်ငန်းတာဝန် ပြီးစီးစေရန်အတွက် ကိရိယာ၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့် စိတ်အားတက်ကြွမှုတို့ကို ခွေးအား ပေးရန်လိုသည်။
ကိုင်တွယ်ထိန်းကြောင်းသူသည် ခွေးက ၎င်းကိုပြောသော အရာကို နားလည်ရမည်ဖြစ်ပြီး ခွေးက ၎င်း၏ စကားကို နားထောင်မည်ကို သံသယမရှိ သိနေရမည်ဖြစ်သည်။
စစ်ဆင်ရေးဝင် စစ်ခွေးနှင့် ထိန်းကျောင်းသူများ လေ့ကျင့်ခန်း အပြင်းအထန် ဆင်းကြရသည်
“ကျနော့်ခွေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်သံသယမရှိဘူး။ တစ်- သူက ကျနော့်ကိုကာကွယ်မယ်။ နှစ် – သူဗုံးရှာမယ်” ဟု ပထမတန်း တပ်ကြပ်ကြီး ရက်ဂျီနာ ဂျွန်ဆင်က the Army စာစောင်သို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် စစ်ခွေးများကို အမေရိကန်အမြဲတန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့ပင် သတ်မှတ်ထားသည်။
သို့သော် စစ်ခွေးများကို စစ်မြေပြင်တွင် ချန်ထားခဲ့သည့် အချိန်တခုလည်း ရှိခဲ့သည်။ တောင်ဗီယက်နမ်မှ အမေရိကန်တပ်များ အလျှင်အမြန် ဆုတ်ခွာရချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီက စစ်ခွေးများ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပြီးစီးသောအခါ သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင်မူ စစ်ခွေးများတာဝန် ထမ်းဆောင်ချိန်ပြီးဆုံးသောအခါ ၎င်းတို့ကို အရပ်သားများ မွေးစားနိုင်သည်။
ကိုင်ရိုအမည်ရှိခွေးကို ပါကစ္စတန်ရှိ ဘင်လာဒင်ကို ရှာရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုစစ်ဆင်ရေးတွင် ကိုင်ရိုပါဝင်သည်ကို သိသောအခါ ထိုစဉ်က သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက “ကျနော် ဒီခွေးနဲ့ တွေ့ချင်တယ်” ဟု ပြောခဲ့သည်ဟု နယူးယော့ကာ စာစောင်က ဖော်ပြသည်။
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး သင်တန်းဝင် ဘလက်ဟော့ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်က စစ်ခွေးတကောင်
“ခွေးကိုတွေ့ချင်ရင်တော့ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ သူ့ကိုအထူးလက်ဆောင် ကျွေးမွေးစရာတွေ ယူသွားဖို့ အကြံပြုပါရစေ” ဟု SEAL တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ဘားရက်အိုဘားမားကို နောက်ပြောင်အကြံပြုခဲ့သည်ဟု the Army က ဖော်ပြသည်။
ခွေးများနှင့် ၎င်းတို့ကို လေ့ကျင့်ပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုခိုင်မာပြီး ပြင်ပအခြေအနေမှန်တွင် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု အလေ့အကျင့် ရစေရန် ၉၃ ရက်ကြာ သင်တန်းအစီအစဉ်ကို ဖြတ်သန်းကြရသည်။
စစ်တပ်က ဝယ်ယူသည့် ခွေးများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ ၎င်းတို့အလုပ်အတွက် သင့်တော်သော စစ်ခွေးများ ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုးကား ။ ။ Business Insider ၏ Military working dogs like the one who chased down ISIS’s leader are treated just like regular troops. Here’s why.
Topics: စစ်ခွေးများ, လုပ်ဆောင်ချက်, အမေရိကန်